नेपाली भू–उपग्रह अन्तरिक्षतर्फ : सफल परीक्षण भए तीन वर्ष अन्तरीक्षमै रहने
काठमाडाैं । नेपालको पहिलो भू–उपग्रह (नानो स्याटेलाइट) अन्तरिक्षतर्फ पठाइएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) र जापानको क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (क्युटेक)को सहकार्यमा जापानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीद्वारा निर्मित ‘नेपाली स्याट–१’ नेपाली समयअनुसार आज (बिहीबार) बिहान २ः३१ मा अन्तरिक्षतर्फ पठाइएको हो ।
सफल परीक्षण भए डेढ महिनापछि भू–उपग्रहलाई अन्तरिक्षको पृथ्वी कक्षमा छाडिने नास्टका प्रविधि विभाग प्रमुख डा. रवीन्द्र ढकालले बताए । त्यतिवेला उपग्रह पृथ्वीको भूमध्यरेखाबाट ९० डिग्रीको कोण भएर पृथ्वीभन्दा करिब चार सय किलोमिटरमाथि नेपालको आकाशमा दैनिक पाँचदेखि १० मिनेटसम्म रहनेछ । उपग्रहले खिचेर पठाउने तस्बिर र त्यसबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा नेपालले थुप्रै उपलब्धि लिन सक्ने डा. ढकाल बताउँछन् । दैनिक मौसम र विपत्सम्बन्धी पूर्वजानकारीसँगै तथा जलवायु परिवर्तनबारे अध्ययनमा नेपाललाई सहयोग पुग्ने उनले बताए । स्याटेलाइटमा ४३७ मेघाहर्जको युएचएफ ब्यान्ड प्रयोग गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले याे समाचार प्रकाशित गरेको छ ।